About Tenorshare iPhone Data Recovery
Tenorshare iPhone Data Recovery kala qaybsan sida software dhowr yar sida Tenorshare Data Recovery iPhone 3GS, iPhone 4 Data Recovery Tenorshare, Tenorshare iPhone 4s Data Recovery iyo Tenorshare iPhone 5 / 5S / 5C Data Recovery. Taasi waa in la yidhaahdo, waxaad ka heli kartaa oo keliya mid ka mid ah ka dib markii aad ka dhigay wax iibsiga. Haddii aad rabto in aad isticmaasho si scan iPhone kala duwan, waxaad u baahan tahay inaad iibsato ugu yaraan 4 jeer. Taasi waa lacag aad u weyn.
About iPhone Tenorshare ka Data Recovery kale
IPhone Tenorshare ayaa Data Recovery kale - Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) waxaa loo isticmaali karaa oo dhan iPhone. Ka sokow, waxaa si toos ah aad isticmaali karto si aad baarista iPad iyo iPod taaban, marka aad u baahan tahay. All lagu daray hal barnaamij galay. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u iibsato hal mar, oo waxaad u isticmaali kartaa oo dhan iPhone, iPad iyo iPod taabto. Next, aynu hubi farqiga u faahfaahsan.
Qalabka ay taageerayaan Waayo, kulli iPad, iPod iPhone iyo taabashada
(taageerayaan hal barnaamij) Wixii iPhone 3GS, ama iPhone 4, ama iPhone 4s, ama iPhone 5 / 5S / 5C
(taageerayaan afar barnaamijyo gaar ah)
Kabsado gurmad Lugood
Illaa iyo 14 nooc oo jira faylka:
Xiriirada, Messages, wac taariikhda, Calendar, Notes, waano, Safari bookmark, Roll Camera, Voice Deymaha maqan, lifaaqyada Message, WhatsApp, Photo Stream, iMessages, farriinta codka
Illaa iyo 11 nooc oo jira faylka:
Xiriirada, Messages, wac taariikhda, Calendar, Notes, waano, Safari bookmark, Roll Camera, Voice Deymaha maqan, lifaaqyada Message, WhatsApp
Ilaa 14 tirtiray noocyada file: Waxaa la mid ah sida kor ku xusan Ma taageeri
Si toos ah iskaan iPhone ah Illaa iyo 15 nooc oo file (Photo Library ka mid ahaa) Illaa iyo 11 nooc oo
Si toos ah scan iPad iyo iPod taabashada Illaa iyo 15 nooc oo file (Photo Library ka mid ahaa) Illaa iyo 11 nooc oo
Download this Tenorshare iPhone Data Recovery kale oo ay isku day ah hadda!
Sida loo isticmaalo this bedel Tenorshare iPhone Data Recovery
Qaybta 1aad: Si toos ah soo kabsado xogta ka ah (xiriiri iPad / iPod) iPhone
Qeybta 2: Waraaqda gurmad Lugood inuu ka soo kabsado xogta iPhone (xiriiri iPad / iPod)
Waxba ma waxaad isticmaali version Windows ama version Mac of this iPhone bedelka kabashada xogta ee Tenorshare, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si ay u sameeyaan hawlaha la mid ah. Geedi socodka oo dhan waxaa la samayn karaa in qasabno yar. Next, aynu isku day la version Mac ka wada.
Qaybta 1aad: Si toos ah soo kabsado xogta ka iPhone ah
Tallaabada 1. Run software iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka
Ka hor inta aadan wax sameyn kale, ordo Tenorshare iPhone kale oo ka soo kabashada xogta iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Marka iPhone waxa lagu ogaan karaa barnaamijka, waxaad arki doonaa daaqadaha kala duwan sida ay model aad iPhone.
Wixii iPhone 4s / 5 / 5S / 5C, suuqa kala barnaamijka wuxuu noqon doonaa sida soo socota:
Wixii iPhone 4 / 3GS, suuqa kala noqon doonaan sida tan:
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone si aad u hesho macluumaadka ku yaal
Haddii aad isticmaasho ah iPhone 4s / 5 / 5S / 5C, aad si toos ah u riixi kartaa batoonka Start Scan ku furmo suuqa hoose si ay u bilaabaan aad ka baareyso iPhone xogta ku yaal.
Haddii aad isticmaasho iPhone ah 4 ama 3GS iPhone ah, waxaad u baahan tahay in la raaco sharaxaad hoos ku qoran si aad u hesho hab iskaanka iyo baarista iPhone:
1. Ku qabo iPhone 4 / 3GS oo riix badhanka Start ee suuqa kala barnaamijka ayaa ah in uu bilawdo ah.
2. Marka aad bilowdo, riix Home iyo badhamada Power on your iPhone waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
3. 10 ilbiriqsi ka dib, sii daayo batoonka, Laakiinse ay xajiyaan riixaya badhanka Home muddo 10 ilbiriqsi oo kale, ilaa aad ka hesho hab iskaanka ah. Markaas barnaamijka si toos ah iskaan doonaa iPhone.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta ka iPhone
Markii geeddi-socodka iskaanka ku dhameysatay, waxaad heli doontaa oo dhan iyo wixii xog jirta ee tirtiray aad iPhone in natiijo baaritaan. Dhammaan xogta ay si fiican u abaabulan. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi shay kasta ee qayb kasta mid mid. Waxaad calaameysaa mid aad rabto iyo badbaadin on your computer iyadoo la isticmaalayo Ladnaansho button.
Hadda, dhammaan tallaabooyinka halkan ku sugan yihiin. Download version maxkamadda oo ay leeyihiin isku day ah oo lacag la'aan ah iskaa!
Qeybta 2: Waraaqda Lugood gurmad inuu ka soo kabsado xogta aad iPhone
Next, aynu hubiyo sida inuu ka soo kabsado xogta tirtiray kaga imaanayo Lugood leh this Tenorshare iPhone Data Recovery kale - Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) . Sidoo kale, aynu wada hubi tallaabooyinka la version Mac ah.
Tallaabada 1. Dooro iyo Macdan gurmad iPhone
Ka dib markii ordaya this iPhone software kabashada xogta, si ay u beddelaan hab dib u soo kabashada on sare ee ay suuqa kala: kabsado Lugood ee kaabta File. Markaas waxaa si toos ah u heli doontaa dhammaan Lugood files gurmad jira aad Mac. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo guji Scan Start si ay u bilaabaan waxaa soo saarida.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta iPhone aad ka gurmad ah
Barnaamijku wuxuu dhalin doonaa natiijo baaritaan aad u sawirka kadib. Waxaa aad ku eegaan karo content oo dhan iyo eegista sax wax kasta oo u soo kabashada. Xogta tirtiray lagu muujiyay orange. Haddii aad rabto in aad kala tagtaan, waxaad u tagi kartaa on filter ah: soo bandhigaan waxyaabaha la tirtiro, kaas oo la tusay on the-top dhexe ee suuqa oo keliya.
Download version maxkamad of this Tenorshare iPhone Data Recovery kale oo hoose oo lacag la'aan ah in ay isku day ah hadda!
> Resource > iPhone > The Best Tenorshare iPhone Data Recovery Alternative